मार्केटिंग निजीकरण: एक सफल फाउंडेशन को4कुञ्जी | Martech Zone
मार्केटिंग निजीकरण: एक सफल फाउन्डेशन को4कुञ्जी
मङ्गलबार, डिसेम्बर 13, 2016 बिहीबार, डिसेम्बर 15, 2016 Douglas Karr
निजीकरण अब सबै क्रोध हो तर यो एक रणनीति हो कि यो अपमानजनक हुन सक्छ यदि यो गलत तरिकाले गरेको छ भने। सबै भन्दा सामान्य उदाहरणलाई लिनुहोस् - यो कस्तो देखिन्छ जब तपाइँ ईमेल सन्देश पाउनुहुन्छ जहाँ यो खुल्दछ, प्रिय %%पहिलो नाम%%... त्यो सबैभन्दा खराब छैन? जबकि यो एक स्पष्ट उदाहरण हो, कम स्पष्ट तपाईंको समुदायमा अप्रासंगिक प्रस्ताव र सामग्री पठाउँदै छ। यसको लागि स्थानमा फाउन्डेशन आवश्यक छ।
रिच, डायनामिक, हाइपर-विशिष्ट लक्षित अनुभवले उपभोक्ताहरूको लागि जीवन सजिलो बनाउँछ र कम्पनीहरूको लागि मार्केटिंग खर्चको प्रभावकारिता बढाउँदछ। यो सबैको लागि वास्तवमा एक जीत हो।
एमडीजी विज्ञापनबाट आएको इन्फोग्राफिकले एडोब, एबरडीन समूह, एड्लुसेन्ट र अन्य धेरै अध्ययनहरूबाट डाटामा हिँड्दछ जुन सफलताको लागि key कुञ्जी आधारहरू समेट्छ।
स्मार्ट बनाम गूंगा रणनीति: निजीकरणको मतलब सरल भन्दा धेरै मात्र हो नाम सहित। आधारभूत निजीकरणको सगाईमा कम प्रभाव छ; यद्यपि विशिष्ट प्रयोगकर्ता कार्यहरूमा आधारित सन्देशहरूमा मानक ईमेलहरूको तुलनामा २X ओपन रेट र X एक्स क्लिक दर हुन्छ। कसरी गतिशील लक्ष्यीकरण प्रभावी सगाईको वास्तविक कुञ्जी हो जान्नुहोस्।
ग्राहकको एकल दृश्य: उपभोक्ताहरू भन्छन निजीकरणका शीर्ष लाभहरू कम अप्रासंगिक विज्ञापन / सन्देशहरू, नयाँ उत्पादनहरू / सेवाहरूको छिटो खोजी, र उच्च-गुणवत्ता किनमेल अन्तर्क्रिया हुन्। यी अनुभवहरू प्रदान गर्न र लक्षित गर्ने शक्तिको लागि तपाईंलाई धनी चाहिन्छ, लगातार उपभोक्ता प्रोफाइलहरू अपडेट गर्दै। पत्ता लगाउनुहोस् किन ग्राहकको एकल दृश्य सफलताको आधार हो।
डाटा र प्रणालीहरू: निजीकरण र डाटा / प्रणालीहरू केवल जोडिएका छैनन्, तिनीहरू मौलिक रूपमा एक-अर्कामा गाँसिएका छन्। ती मार्केटरहरू जसले भन्छन कि उनीहरूले सामग्रीलाई निजीकृत गर्दैनन्,%%% भन्छन् कि प्रमुख बाधा भनेको टेक्नोलोजी हो र% 59% भन्छन कि तिनीहरूसँग सही डेटाको अभाव छ। सही प्लेटफर्ममा कसरी लगानी गर्ने र व्यक्तिले ठूलो पैसा तिर्न सक्छ भनेर अन्वेषण गर्नुहोस्।
पारदर्शिता र सुरक्षा: व्यक्तिहरू निजीकरणबाट सावधान रहन्छन् किनकि डाटा कसरी प्रयोग र भण्डारण हुँदैछ भनेर यकिन हुँदैनन्। यसैले किन नियन्त्रण र सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ। केहि online०% अनलाइन प्रयोगकर्ताहरू जान्न चाहन्छन् कि कसरी वेबसाइटले उनीहरूको लागि व्यक्तिगत सामग्री चयन गर्दछ र consumers 60% उपभोक्ताहरू कसरी उनीहरूको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग हुनेछ भनेर निर्धारण गर्न रुचाउँदछन्। यी सरोकारहरू कसरी उत्तम समाधान गर्ने बुझ्नुहोस्।
तपाइँको ब्रान्डको लागि यि धेरै रणनीतिहरू कसरी बनाउने भनेर पत्ता लगाउन, जाँच गर्नुहोस् Marketing चरणहरू मार्केटिंग निजीकरणको वास्तविक शक्ति अनलक गर्न.
टैग: ग्राहक दृश्यडाटा पहुँचताडाटा सुरक्षाडाटा पारदर्शिताएमडीजी विज्ञापननिजीकरणनिजीकरण डाटासुरक्षापारदर्शिता
मार्केटिंग परिदृश्य नरकबाट - टन्स अफ लिड्स, तर बिक्री भने छैन
शीर्ष M गल्तीहरू मार्केटि Auto स्वचालनमा बेवास्ता गर्न